Ndege indasitiri inorasikirwa kumusoro $ 200 bhiriyoni mu2020-2022
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Ndege indasitiri inorasikirwa kumusoro $ 200 bhiriyoni mu2020-2022
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Vanhu havana kurasikirwa nechishuwo chekufamba sezvatinoona mune yakasimba yemisika yekushinga. Asi ivo vari kudzoserwa kumashure kubva kune dzimwe nyika kufamba nezvirambidzo, kusava nechokwadi uye kuomarara.
Net indasitiri kurasikirwa kuri kutarisirwa kudzikira kusvika pa $ 11.6 bhiriyoni muna 2022 mushure mekurasikirwa ne $ 51.8 bhiriyoni muna 2021 (yakawedzera kubva pakurasikirwa nemabhiriyoni emadhora 47.7 anofungidzirwa muna Kubvumbi).
Kudiwa (kuyerwa muRPKs) kunotarisirwa kumira pamakumi mana muzana emazinga e40 e2019, ichikwira kuenda ku2021% muna 61.
Hwerengedzo dzevatyairi nhamba dzinotarisirwa kusvika pamabhirioni 2.3 muna 2021.
The International Mhepo Yekufambisa Sangano (IATA) yakazivisa maonero ayo azvino eindasitiri yendege mashandiro emari inoratidza zviratidziro pakati pekuenderera kwedambudziko reCOVID-19:
Net indasitiri kurasikirwa kuri kutarisirwa kudzikira kusvika pa $ 11.6 bhiriyoni muna 2022 mushure mekurasikirwa ne $ 51.8 bhiriyoni muna 2021 (yakawedzera kubva pakurasikirwa nemabhiriyoni emadhora 47.7 anofungidzirwa muna Kubvumbi). Net 2020 yekufungidzira kurasikirwa yakarongedzwa ikava $ 137.7 bhiriyoni (kubva pamadhora 126.4 bhiriyoni). Kuwedzera izvi kumusoro, yakazara indasitiri kurasikirwa muna 2020-2022 inotarisirwa kusvika $ 201 bhiriyoni.
Huwandu hwevapfuuri hunotarisirwa kusvika pamabhirioni e2.3 muna 2021. Izvi zvinokura kusvika pamabhirioni e3.4 muna2022 izvo zvakafanana nematanho a2014 uye zvakanyanya pazasi pevane mamirioni 4.5 vafambi ve2019.
Kudiwa kwakasimba kwemutoro wemhepo kunotarisirwa kuenderera pamwe ne2021 kudiwa pa7.9% pamusoro pematanho e2019, ichikura kusvika pa13.2% pamusoro pematanho e2019 e2022.
Willie Walsh, Director General weIATA
“Kukura kwedambudziko re COVID-19 kumakambani endege kwakakura zvikuru. Pamusoro peiyo 2020-2022 nguva kurasikirwa kwese kunogona kumusoro $ 200 bhiriyoni. Kuti vararame nendege dzakaderedza zvinodhura uye vakagadzirisa bhizinesi ravo kune chero mikana yaivepo. Izvo zvichaona madhora zana nemakumi manomwe nenomwe emadhora ekurasikirwa kwe137.7 kudzikira kusvika pamadhora makumi mashanu nemaviri emadhora gore rino. Uye izvo zvichawedzera kudzikira kusvika pamadhora gumi nemaviri emadhora muna 2020. Isu tanyatsopfuura nzvimbo yakadzika yedambudziko. Nepo nyaya dzakakomba dzichiripo, nzira yekudzoka iri kuuya pakuonekwa. Ndege iri kuratidza kushinga kwayo zvekare, ”akadaro Willie Walsh, Mutungamiriri weIATA General.
Bhizinesi rekutakura nendege riri kuita mushe, uye kufamba mudzimba kuchaswedera padanho rematambudziko muna 2022. Dambudziko ndere misika yepasi rose inoramba ichinetseka zvakanyanya sezvo ganhuriro dzakatemerwa nehurumende dzichienderera mberi.
“Vanhu havana kurasikirwa nechido chekufamba sezvatinoona mukushinga kwemisika yemumba. Asi ivo vari kudzoserwa kumashure kubva kune dzimwe nyika kufamba nezvirambidzo, kusava nechokwadi uye kuomarara. Dzimwe hurumende dziri kuona majekiseni senzira yekubuda mudambudziko iri. Tinobvumirana zvizere kuti vakabaiwa majekiseni havafanirwe kuve nerusununguko rwekufamba rwakaganhurirwa munzira ipi neipi. Asi izvo, rusununguko rwekufamba chinhu chinokurudzira vanhu vazhinji kubayiwa jekiseni. Hurumende dzinofanirwa kushanda pamwechete uye kuita zvese zvavanogona kuona kuti majekiseni anowanikwa kune chero munhu anoada, ”akadaro Walsh.
Page 1 pamusoro 3 Prev Next